Zvinhu 3 zvave kuwanikwa zveMac, iOS uye Apple Watch | Ndinobva mac
Iyo yakasimba Yakagadziriswa Kodhi yakatotangisa zviri pamutemo vhezheni yechitatu yezvinhu, imwe yeanonyanya kufarirwa uye akanyanya-akapihwa mamaneja emabasa eMac, iOS uye Apple Watch, ine mushandisi interface yakadzokororwa uye nekuvandudzwa, uye nemamwe mabasa matsva kuita manejimendi edu akamirira mabasa kunyatsoita basa.
Nekudaro, avo vatove vashandisi veZvinhu zve iPhone, iPad, kana Mac, vanozofara zvikuru neizvi zvitsva maficha uye nekuvandudzwa mukuita uye kuwiriranisa kuburikidza neZinhu Cloud. Zvisinei, izvo zvausingade zvakanyanya ivo vanofanirwa kupfuura nemubhadharo zvakare chimwe chinhu icho, kunyangwe padudziro yekushambadzira yakapihwa kwechinguva, ichizosanganisira mari nyowani yakati wandei sezvo isiri yemapurogiramu epasi rose asi inofanira kutengwa nekubhadharwa zvakasiyana kune yega yega zvishandiso patinoda kuishandisa.
1 Iyo Zvinhu basa maneja inosvika kune yayo yechitatu vhezheni
1.1 Mashiripiti Uye Bhatani
Iyo Zvinhu basa maneja inosvika kune yayo yechitatu vhezheni
MuApp Store, zvese zveIOS uye macOS, tinogona kuwana huwandu hwakawanda uye zvakasiyana siyana zvekushandisa zvinotibatsira isu gadzirisa edu akamirira mabasa, shandisa zviri nani nguva, uye uve unobudirira. Kunyangwe isu tisingakwanise kuramba kuti kune marara akawanda, chokwadi ndechekuti kune zvakare yakawanda yakanaka mamaneja emabasa, kiyi, dzimwe nguva, iri mukutsvaga iyo inonyatsoenderana nezvatinoda.
Chaizvoizvo nekuda kwechikonzero ichi, uye nekugadzirwa kwayo, zvinhu anga ari mumwe weakakurumbira uye anozivikanwa mamaneja maneja kubva payakatangwa, nekuti Iyo inochinja-chinja kwazvo, inokwanisa kuchinjira kune izvo zvinodiwa nemushandisi uye kunyanya avo vanoshandisa iyo "Kuita Zvinhu Zvakaitwa" nzira. kana GTD.
Zvino Zvinhu zvinosvika vhezheni yayo yechitatu yeMac, iOS uye Apple Watch kugadzirisa ayo ekushandisa interface uye kusanganisa matsva mabasa, apo uchichengetedza kuwiriranisa kwakakwana pakati pemidziyo kuburikidza neZvinhu Cloud.
Nezve iyo design, izvi zvinoratidzwa yakachena zvikuru, kuyedza kubatanidza zvinhu zvekare nezvitsva, uye kuunza zvirimo pamberi pemushandisi. Nekudaro, izvo zvakamirira mabasa zvinogona kutariswa nekupa kana kwete zvimwe zvekuwedzera senge zvinyorwa, zvinyorwa, zuva rekutanga kana nguva yekupedzisira. Uye zvakare, idzi minda dzinogona kurongeka zvichibva pamafambiro akaita sekudhonza nekudonhedza, swipe, zvichingodaro
Kudhonza pasi mukati mechero runyorwa kunoita a Kurumidza kutsvaga iyo inokutendera iwe kutsvaga iyo yese kunyorera ye-ku-dos, zvinyorwa, mataki uye nezvimwe.
Uye kunyatsoona kufambira mberi kwedu, a chiratidzo chinofambira mberi chemapurojekiti.
Nhasi uye Anouya screens izvozvi ratidza zviitiko zvekarenda uye zvekuita pamwe chete, apo zviitiko zvezuva ranhasi zvinoratidzwa pane yakatarwa nguva pamusoro. Nenzira iyi, zuva rega rega pakati pehusiku, izvo-zvekuita zvezuva rinotevera zvichaonekwa kumusoro kweiyo Nhasi runyorwa.
Kuwedzera chikamu chitsva "Masikati ano" chaverengerwa kufambisa kurongeka kwezuva.
Mamwe matsva akaunzwa na Zvinhu 3 ndiyo misoro, uye iyo checklists mukati memunhu mabasa, ichibvumira kuti mabasa aputsike mumatanho akatowanda.
Mashiripiti Uye Bhatani
Mashiripiti Uye Bhatani ndiyo nzira nyowani yekugadzira ma-dos. Iyo bhatani rakaiswa mukona rekona uye rinogona kudzvanywa kana kudhonzwa kune rakanyanya runyorwa kuitira kuti gadzira basa munzvimbo yakatarwa. Uye zvakare, iri "bhatani remashiripiti" rinogona zvakare kushandiswa kukurumidza kugadzira uye kuisa misoro muzvirongwa zvitsva.
Zvinhu 3 zvinopawo a Yakagadziridzwa app yeApple Watch, inobvumira iyo kupinza kubva kuWunderlist uye OmniFocus, one chimiro chitsva cheMunharaunda, Bata Bhar kutsigira paMacBook Pro, itsva Maitiro Ekufamba, uye nezvimwe.
Asi sezvatakataura, nhau dzakaipa ndedzekuti Zvinhu zvevashandisi zvichafanirwa kupfuura nepakati zvakare zvekare Muchisarudzo icho Apple inofanirwa kuongorora zvakakomba: kusvika papi vashandisi vanofanira kubhadhara zvekare kune chigadzirwa chavanacho uye icho chinongosanganisira kuvandudza?
Iyo Mac, iPad uye iPhone / Apple Watch shanduro dzeZvinhu zvinotengeswa zvakasiyana nemutengo we € 43,99, € 17,99 uye € 8,99 zvichiteerana, kusanganisira 20% dhisikaundi iyo icharamba ichishanda kusvika 25 Chivabvu. pane iyo Tsika Code webhusaiti iwe yaunogona tora 14-zuva rekuyedza vhezheni neZvinhu zveMac.
Zvinhu 349,99 €
Zvinhu 3 zvePadad19,99 €
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Zvinhu 3 zvave kuwanikwa zveMac, iOS uye Apple Watch
Tim Cook anoedza iyo nyowani hutano prototype yeApple Watch